Panama : Lalàna Vaovao Hiarovana Ny Mpitandro Filaminana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2013 14:24 GMT
Sary avy amin'i Garrison Gunter ao amin'ny Flickr, alàlana avy amin'ny Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
[Mankany amin'ny pejy miteny Espaniola ireo rohy]
Nanolotra volavolan-dalàna hiadiana amin'ny heloka voarindra amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny sazy any an-tranomaizina ho an'ny heloka sasany toy ny famonoana olona ny mpampanoa Lalàna Panameana, Ana Belfon ; fa manasazy ihany koa “ireo mitady hanakana ny fanenjehana ireo mpanao heloka voarindra amin'ny alalan'ny fandrahonana” io volavolan-dalàna faha 651 io araka ny notaterin'ny El Panamá América.
Toa raisin'ireo Panameana ho fiarovana ny mpitandro filaminana sy fampitomboana ny fahefana ananany ilay volavolan-dalàna faha 651. Niteraka olana io volavolan-dalàna io indrindra eo amin'ny andininy faha 42 izay manao hoe “na iza na iza mampiasa hery na teny mba handrahonana vavolombelona, manam-pahaizana, mpitsara, mpampanoa lalàna na mpitandro filaminana dia ho saziana valo ka hatramin'ny roambin'ny folo taona an-tranomaizina na aiza na aiza.”
Ny fisianà mpitandro filaminana voarohirohy aminà zava-niseho volana maro lasa izy no mampiahiahy ny Panameana. Ny tranga ratsy indrindra tamin'izany dia tamin'ilay nitifiran'ny mpitandro filaminana fiara iray izay nahafaty zaza tsy ampy taona roa.
Azo adika amin'ny hevitra maro sy malalaka ilay andininy faha 42. Ohatra, fihetsika inona no azo adika ho fandrahonana ny mpitandro filaminana ?
Nifanojo tamin'ireo feo an'arivony naneho ahiahy amin'ny mety ho fampiharana ilay lalàna ny Blog de Panamá :
Amin'izao fotoana izao, raha toa ianao ka mandrahona mpitandro filaminana ary entina any amin'ny fitsarana alina na manoloana mpitsara, ka mitaky onitra na mampiditra am-ponja izy (onitra aloha ao anatin'ny andro vitsivitsy voafetra) ity farany, TENA TSY MAINTSY miditra 12 taona an-tranomaizina ve, ny olona iray nalama vava na nanendrikendrola ny mpitandro filaminana ho nanararaotra fahefàna ? Satria ilay bandy leo fa nahilika tammin'ny fotoana nifandrombahan'ny olona niresaka tamin'ny mpitandro filaminana? Na tany amina kianja ? Satria ilay mpamily sosotra tamina tapakila na fizahana tahan'alikaola ? Tsy mitady zavatra sarotra ilay volavolan-dalàna. Ny “MAHA-MPITANDRO FILAMINANA” sy ny fisian'ny “FAMPITAHORANA” na ” FANDRAHONANA” dia ampy hahazoana sazy 12 taona an-tranomaizina. Mazava fa natao hiarovana ny mpitandro filaminana IHANY io lalàna io, satria ny mpitsara sy ny mpampanoa lalàna dia efa voaaron'ny lalàna 388 miaraka amin'ny sazy “5 ka hatramin'ny 10 taona” an-tranomaizina (zavatra izay tsy mitombina mihitsy).
Ny fanontaniana manaraka dia ity, ahoana no hanaporofoan'ny mpitandro filaminana ny heloka vita ? Amin'ny fijoroany vavolombelona ? Amin'ny alàlan'ny tatitry ny mpiara-miasa aminy ? avy aminà loharanom-baovao voaaro ? Fa ny fanontaniana dia INONA NO AO AMBADIK'IO SAZY IO ? Inona no anton'ireny isa tsy misy fotony ireny ? Izahay manam-pahaizana manokana momba ny heloka bevava dia mahafantatra fa ny heloka voasazy mihoatra ny 6 taona dia midika fa TSY AZO AFAHANA AMIN'NY FANDOAVAM-BOLA IANAO, ary ambonin'izany dia ambaran'ny LALANA fa azo atao ny mitazona mandritra ny fe-potoana FOHY indrindra voalazan'ny sazy mihatra. Averiko indray fa 8 ka hatramin'ny 12 taona ny fetra.
Etsy andanin'izay, hita niharihary tao amin'ny Twitter ny fanoheran'ny vahoaka io lalàna io.
Ho an'i Rafael Candanedo ohatra, dia porofon'ny rafitra jadona tian'ny Filoha Panameana Ricardo Martinelli apetraka io.
Lasa ara-dalàna ny jadona sy ny mpanao jadona amin'ny lalàna 651
Tokony ho tadiavina aloha ny fomba hisorohana ny herisetran'ny mpitandro filaminana izay vao mamoaka lalàna sahala amin'itony, araka ny hevitr'i Mcsuyelis Díaz :
Lalàna 651 OK vonoin'ny mpitandro filaminana ianao, diso ry zareo dia nitifitra aloha izay vao niala tsiny ary fanampin'izany raha be famaliana ianao dia hosamboriny.
Mijery lavitra kosa i Miguel Antonio Bernal ary tsinjony fa manana drafitra izay mankany aminà hosoka amin'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka 2014 io lalàna io :
Raha toa ka mangina ireo mpilatsaka ho Filoha, Ricardo Martinelli sy Ms Belfond kosa dia mamolavola lalàna (651) hiadiana mafy amin'ny olom-pirenena. Manomboka hita soritra ny hosoka amin'ny fifidianana !
Na dia izany aza dia nazavain'ilay mpampanoa lalàna tao amin'ny Telemetro fa natao hiarovana ny vahoaka ny lalàna fa tsy ho fiarovana ny mpitandro filaminana : “Nazavain'ilay Mpampano aLalàna fa natao ho an'ny famonoana olona sy ireo heloka mifandray aminà heloka voarindra io lalàna io ; ary ny tanjony dia ny hiarovana ny vahoaka amin'ireo izay manatanteraka io heloka io “.
Tsy eken'ny Panameana izany ka toherin'izy ireo amin'ny fampiakaram-peo. Ao anatin'ny adihevitra tapany faharoa io volavolan-dalàna io, izay efa nekena tamin'ny tapany voalohany ary mila mandalo fihodinana in-telo vao lasa lalàna mihatra.